Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. व्यापार नउक्से पनि फिल्म धमाधम – Emountain TV
काठमाडौँ, २४ साउन । ०७५ को पहिलो चौमासिक सकिन एक साता मात्रै बाँकी छँदा नेपाली फिल्मको व्यापारिक अवस्था भने दयनीय नै देखिएको छ । वैशाख ७ मा ‘स्वर्ग मेरो गाउँ’ फिल्मले वर्षको ओपनिङ गरे पनि व्यापार भने स्वर्णिम हुन सकेन ।
वैशाख दोस्रो साता विशाल भण्डारी निर्देशित ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ रिलिज भयो । केकी अधिकारी निर्मितरअभिनीत भनेर त छँदै थियो, ‘सीओडब्ल्यु काउ’ गीतका कारण पनि राम्रै हाइप बटुलेको उक्त फिल्मको रिलिजसँगै सम्बद्ध फिल्मकर्मीहरू मुख लुकाउन बाध्य भए ।
दर्शकलाई उक्त फिल्म बलिउडको ‘मुम्बई एक्सप्रेस’ सँग फ्रेम बाई फ्रेम मिलेको थाहा पाउन समय लागेन । फिल्मले जेनतेन दर्शक तानिरहेका बेला नक्कल गरी बनाइएको हल्लाले अन्तत व्यापारमा समेत असर गर्‍यो । भलै, केकीले विदेशमा समेत चलाएर लगानी धेरथोर उठाएको भए उपलब्धि नै मान्नुपर्छ, स्वदेशी बक्स अफिसले भने सुखद अनुभूति दिलाउन सकेन ।
चार महिना सकिन लाग्दा साउन अन्तिम साता रिलिज हुने तीन फिल्म ‘पिरिम पर्‍या छ’, ‘कहीं कतै’ र ‘टिनएज’ अपवाद होलान् त  थाहा पाउन केही दिन कुर्नुपर्नेछ । कान्तिपुरबाट